बेलायतबाट नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटक संख्या वृद्धि | We Nepali
बेलायतबाट नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटक संख्या वृद्धि
२०७५ पुष २५ गते ८:२०
लन्डन । नेपाल भ्रमण गर्ने बेलायती पर्यटक संख्या वृद्धि भएको छ । बेलायतबाट गत वर्ष सन् २०१८ मा ६३ हजार ८६ बेलायती पर्यटक नेपाल भ्रमणमा गएको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले मंगलबार जनाएको छ । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ दशमलव ६ प्रतिशत बढि हो ।
दूतावासबाट एकै दिन होम डेलिभरी भिसा सर्भिस, बेलायतमा पर्यटन प्रबर्धन र नेपालको राम्रो वातावरणले पर्यटक बढेका दूतावासको भनाइ छ ।
नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले यस वर्ष ८० हजार र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा एक लाख बेलायती पर्यटक नेपाल भित्रयाइने दावी गरेका छन् ।
सन् २०१८ मा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या उत्साहजनक वृद्धि भई झण्डै १२ लाख पुगेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार ७२ पर्यटक नेपाल आएका छन् जुन सन् २०१७ को तुलनामा २४.७७ प्रतिशतले बढि हो ।
यसैबीच, ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ अभियान सफल बनाउन बेलायतमा एक उच्चस्तरिय समिति गठनको तयारी भएको छ । नेपाली राजदूत डा. सुवेदीको अध्यक्षतामा यही १९ जनवरी सांझ दूतावासमा विशेष कार्यक्रमबीच एक उच्चस्तरिय समिति यूके बनाउन लागिएको हो ।